Orange - fananana ilaina, fitsaboana, fomba fahandro
Fianakaviana faka. Hazo fihinam-boa maitso maitso ambolena betsaka any amin'ny firenena tropikaly sy subtropika.
mamy voasary voalaza ao amin'ny sora-tanana sinoa nanomboka tamin'ny 2200 talohan'i JK. e. Ny zava-maniry dia nentin'ny Arabo nankany Syria sy Afrika ny zavamaniry, ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX. niseho voalohany tany Eropa. Tao amin'ny faritanin'i Russia, ny trano fandraisam-bahiny voalohany dia niseho teo ambanin'i Peter I akaikin'i St. Petersburg. Any Kaokazy, ny volomboasary dia namboly tany an-tsaha hatramin'ny fiandohan'ny taonjato lasa.
Ny ravina hazo orange dia tsy mitombina, vita amin'ny hoditra, voaravaka petioles. Ny voninkazo dia mahazatra, fotsy, tokana na miaraka amina voninkazo vitsivitsy. Ny voankazo dia boribory boribory lavalava na boribory.
Ny voankazo voasary dia misy siramamy, asidra citrika, vitamina C, ary koa vitamina P, A, vondrona B, pectin, bioflavonoids, phytoncides, potassium, calcium, phosphore, pigments, ary huile essentielle ao anaty voan'ny voankazo, voninkazo sy ravina .
Amin'ny fanafody folk, ny mpitsabo sinoa sy Tibetana dia nampiasa ranom-boasary hanasitranana sy hamonoana ny ratra sy fery, ary ny lokon'ny alikaola amin'ny hoditra dia natao fanafody anti-febrile. Ny famoahana ny rano amin'ny hodiny, indrindra ny voasary tsy masaka, - toy ny stirmanika mivoaka amin'ny rà, ary koa ny fadimbolana mavesatra.
Ny voasary dia ampiasaina ho fanafody multivitamin ho an'ny hypo- sy avitaminosis, gout, hypertension, atherosclerosis ary aretin'aty. Ny ranom-boasary dia manentana tsara ny fahazotoan-komana, mamaly ny hetaheta, indrindra amin'ny hafanan'ny vatana miakatra, ny tazo.
Ny ranom-boankazo koa dia manatsara ny fandevonan-kanina ny sakafo, saingy tsy zakan'ny marary mararin'ny vavony sy ny fitomboan'ny fitiavan'ny ranon'ny vavony.
Noho ny habetsahan'ny otrikaina pectin, ny voankazo voasary dia misy akony amin'ny famongorana ireo zavatra misy poizina avy amin'ny vatana, mampiroborobo ny fanafoanana ny sira ny metaly mavesatra sy ny radionuclides avy amin'ny vatana.
Ranom-boasary - recette
Voasana ny voasary, esorina ary potserina. Ampiasaina fanosotra amin'ny ratra, fery amin'ny ulcerative, fandriana amam-pandriana.
Voasary peel voasary - fomba fahandro
Ny hoditry ny voasary voasasa teo aloha dia potehina ary araraka amin'ny alikaola 70 °, amin'ny refy 1: 10. Mikiriza mandritra ny 2 herinandro amin'ny toerana maizin'ny mari-pana sy ny sivana amin'ny efitrano. Tiffure 1 sotrokely no ampiana amin'ny dite, raha sanatria ka manavy ireo dia misotro in-3 isan'andro.
Vovon-koditra volomboasary. Araraka amin'ny vovo-paiso vita amin'ny voasary makirana iray vera no araraka amin'ny rano 1 vera ary andrahoina mandritra ny 1 ora 15 minitra. Misisika mandritra ny 30 minitra. Izy ireo dia manivana. Misotroa ampahefatry ny vera 3-4 in-droa miaraka amin'ny rà mandriaka na amin'ny fadim-bolana.
Ampiasao amin'ny sakafo
Ny voankazo volomboasary dia be mpampiasa amin'ny endriny voajanahary ho toy ny tsindrin-tsakafo, ary koa amin'ny fahazoana ranom-boankazo, zava-pisotro, tsiranoka, voankazo misy vatomamy. Ny hoditry ny voankazo dia ampiasaina hahazoana menaka manitra manitra, izay ampiasaina amin'ny famokarana zava-pisotro, liqueur ary tincture.
Ranom-boasary miaraka amin'ny karaoty sy voaloboka. Ny voasary voasarona avy amin'ny hoditr'ondry dia voadidy ho silaka ary araraka amin'ny rano, atao anaty afo. Ny voaloboka voasasa, ny karaoty voakiky, ny kanelina ary ny crème dia ampiana amin'ny fangaro mangotraka, ampangotrahina ny zava-drehetra, ary avy eo dia nikiry nandritra ny 15-20 minitra. Manaova vanim-potoana miaraka amin'ny asidra citrika sy xylitol.
Voasary - 100 g, voaloboka maina - 10 g, kanelina - 3 g, karaoty - 30 g, crème - 20 g, asidra citrika - 1 g, xylitol - 7-10 g.
Misotro voasary miaraka amin'ny voatavo, hazelnuts. Voaso ny voatavo ary hokapaina ho cubes kely, potipotehina ny voanjo voahidy, mizara roa ny voasary ary voatetika tsara ilay zest. Araraka amin'ny rano mangotraka ny rehetra, ary avy eo mangatsiaka ary miharo tantely.
Voatavo - 100 g, volomboasary - 100 g, tantely - 10 g, hazelinà - 10 g, rano mangotraka - 550 ml.
Duck amin'ny saosy voasary: ​​safidy amin'ny fomba fahandro
Misotro gourmet - voasarimakirana voasary
Sicilian mena volomboasary: ​​fananana mahasoa sy ny contraindications
Ahoana ny fikaroham-bolo volomboasary: ​​dingana tsirairay, pensilihazo
Salady miaraka amina volomboasary sy foza - fomba fahandro am-boalohany
Ao amin'ny lisitra fotsy ianao
53 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,476.